IFTIINKACUSUB.COM: Tartanka iyo Jibbada Waddo samaysiga aynu ku badalno Tartanka Biyo Xidheenada.
Tartanka iyo Jibbada Waddo samaysiga aynu ku badalno Tartanka Biyo Xidheenada.
Waxaa hubaala in Dadku hadba dhinacii loo jaheeyo ay ku jahaysmayaan ,Bini'aadmuguna sidiisaba waxa uu wax ka qabtaa Tartanka iyo Ficil tanka, taas waxaa maanta markhati u ah Somaliland gudaheeda ma jiro Deegaan aan ku dhawaqin in uu Waddo dhisanaayo gaar ahaan Tuulooyinka iyo Daabiyadaha ,taasi waxa ay ku tusaysaa Tartanka iyo Xifiltanka Qabiilka hoosta ku watta ee ay dadku ku tartamayaan Waddo samaysiga ,waana marka Faa'iidada uu leeyahay Tartanka Qabaliga ahi.
Waa in aynu is waydiinaa Maxay ayaa faa'iido ku jira hadii aad Deegaankaagii iyo Tuuloyinkaagii aad u sameeyo Waddo Laamay ah oo aad u qurux badan ,lakiin Xiliyada Roobku yaraado dhamaan Dadkii Goobahasi dagana ay Naf iyo maal u wada bakhtiyayaan Biyo la'aan iyo Haraad awgeed ,mise waxa aynu wadad u samaynaynaa si ay ugu maraan Booyadaha Biya dhaamisku ,miyanay markaasi ka horayn in Biyaha la horaysiiyo Wadadanu ay danbayso.
Markasta Abaarahu way inagu soo noqnoqdaan walina waxa aynu u la'nahay Xal iyo Xeelad lagaga Gudbo ,Ilahay csw waxa uu Garaadka iyo Caqliga waxa uu inoo siiyay in Dhibaato kasta oo inagu dhacda aynu ka fikirno qaabkii aynu uga gudbi lahay.
Waxa fiican in Dawlada Dalka ka jirta ay Dadkan iyo Dalkan abaarahu markasta ay kusoo noq-noqonayaan ay Xal u raadiso,waxa aynu wada ognahay in Wakhtigin aynu hada aynu ku jiro ay wadankii ka da'ayaan Roobab aad u badani kuwaasi oo aan isleeyahay isha ALLAA waa ay socondonaan ilaa xiliga Gu'ga uu dhamanaayo ,balse dhibatada tagani waxa ay tahay ma jiraan oo ma muuqataa cid ka fikiraysa in Roobabkaasi Biyahooda la xidho intii karaan keena ah.
Dawaladuhu waxa ay leeyihiin Wasaarado iyo Wakaalada qaabilsan arimaha Biyaha iyo Qaabka loo sameeyo Biya xidheenada hadii aanay jirina waa in la sameeyaa Hay'adahaasi ,si markasta aanay usoo noqon Biyo la'aani ,ma waxa aynu ka liidanaa Reer Miyuguba waxa ay Biyaha ku kaydsan yireen Barkado kadibna waxa ay cabbi jireen xiliga Jilaalka .